Håkan Larsson /”akora Properties”: Diso antontan-taratasy ho any amin'ny Fikisahana Board, indented F-hetra sy ny orinasa vaovao anarana | Holmbygden.se
Håkan Larsson /”akora Properties”: Diso antontan-taratasy ho any amin'ny Fikisahana Board, indented F-hetra sy ny orinasa vaovao anarana
Posted on 28 Novambra, 2015 ny Holmbygden.se
Fa efa manomana namonjy hahazo na oviana na oviana mba handray mpitsoa-ponenana ao Stendahls skandalhus. Nandritra ny fahazazany tantara ratsy sy ny tsy ara-dalàna dia hitohy ny tompony vaovao Håkan Larsson from Örebro, ankehitriny miara-miasa amin'ny mpiasa Stendahs. Taorian'ny fandavana ny rohy Johan Stendahl haseho any Zavatra Television News Västernorrland, fa mivoaka izao fisalasalana vaovao maro:
-Diso ao amin'ny fangatahana fanamarinana nalefa ho any amin'ny Fikisahana Board.
Ary koa, fananana fiovana anarana.
Indented F-hetra Håkan Larsson orinasa.
Nandainga momba ny fandraisana mifandray amin'ny fanatanjahan-tena teo an-toerana Club.
Raha tsy misy mieritreritra alalana / trano fahazoan-dalana ho fialokalofana zavatra ilaina.
Fake taratasy fangatahana ho amin'ny Fikisahana Board
Håkan Larsson sy Johan Stendahl torohevitra ara-dalàna mpisolovava Michael Sterner rivotra diso nametraka taratasy fanamarinana ny fananana no Anundgård ny veloma ho amin'ny Fikisahana Board hahazo sitraka. Ny rivotra tonga ny fanaraha-maso avy amin'ny orinasa tsy misy F hetra sy ny tsy misy fankatoavana ho an'ny maso. Accommodation fananana voakasika koa manamarina ny tsy misy mpanara-maso mihitsy aza ny teo amin'ny trano izay voalaza fa nizaha ny protocols.
Michael Sterner dia tahaka ny Stendahl toy ny 2013 rehefa hariva dia nametraka antontan-taratasy ho an'ny trano-diso afo fiarovana ny Fikisahana Board. Toy Rescue Medelpad avy eo tena Mazava ho azy fa nandainga.
Ary koa, fananana fiovana anarana – tsy “akora Properties”
Ara-potoana noho ny filana ny fialokalofana zavatra ilaina 2013 jiro “Stendahl skandalhus” ny tompon'ny vaovao amin'ny taratasy “hofan-trano” orinasa – Aros Energy fanambarana iray nanana olom-pantatra ny Johan Stendahl. Toy izany koa, dia tamin'ny ririnina, rehefa olom-pantatra iray hafa ny Stendahl, Håkan Larsson nividy fananana. Håkan Larsson naka, na izany aza, raha ny amin'ny fanambarana Angovo Aros Johan Stendahls solontena ara-dalàna toy ny hany tale.
Anarana ankehitriny, na izany aza, avy any Håkan Larsson Bilkonsult AB akora Fastigheter AB. Raha ny antony dia ny hoe Håkan Larssons fifandraisana amin'ny Stendahl misaron- mazava.
Indented F hetra
Taorian'ny dia be bola tantara, lafy ratsiny sy ny tsy fahampian'ny fandraisana andraikitra ankehitriny Skatteverket nampiditra hetra F-Håkan Larsson orinasa Aros Energy fanambarana. Na dia izany no Johan Stendahls mpisolovava Michael Sterner izay mipetraka eo amin'ny solaitrabe.
Tvatolampy det, fanilikilihan'ireo rehetra teo aloha amin'ny alalan'ny Service ny fifindra-monina sy ny fifandraisana amin'ny Johan Stendahl, Zavatra meloka State ampahefatry ny arivo tapitrisa, mahazo Håkan Larsson Bilkonsult avy Örebro sonia fifanarahana miaraka amin'ny teny soedoa Fikisahana Birao sy ny zavatra ilaina tantara ratsy fialokalofana misokatra trano.
Nandainga momba ny fandraisana mifandray amin'ny fanatanjahan-tena teo an-toerana Club
Rehefa Håkan Larsson no mamaritra ny fakany ao Holm, dia nanoratra fa nanao fanatanjahan-tena nifandray tamin'ny kibay an-toerana. Izany dia nanohitra ny Holm Sportklubb, na dia tsy misy ny teo amin'ny fialokalofana rehetra mikasika ny zavatra ilaina. Na mety hanana izany misy vaovao ampitaina any amin'ny tanàna na Misahana ny voalamina.
Raha tsy misy drafitra alalana / fanorenana fahazoan-dalana
Tsy manana fahazoan-dalana ho an'ny fanorenana ny vitan'ny fialokalofana zavatra ilaina amin'ny fananana. Raha ny mahazatra dia takiana fahazoan-dalana na drafitra fanorenana fampiharana amin'ny fanovana ny fampiasana ny trano, izany hoe, rehefa mandeha avy amin'ny asa iray hafa.
Mpitsoa-ponenana Accommodation fa miara-mipetraka amin'ny hafa izy, fa tsy mahalala, dia hihaona ny fepetra ny Building lalàna ny ny fiaraha-mientana.